2019 #NABShow: စက်ရုပ်, သင်တို့သည်ငါ၏မော်တော်ကားမောင်းနိုင်သလား - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow: စက်ရုပ်, သင်တို့သည်ငါ၏မော်တော်ကားမောင်းနိုင်သလား
2019 #NABShow: စက်ရုပ်, သင်တို့သည်ငါ၏မော်တော်ကားမောင်းနိုင်သလား
သငျသညျ Self-ကားမောင်းကားတွေ, စက်ရုပ်ကားများ, ဒါမှမဟုတ်ယာဉ်မောင်း-လျော့နည်းကားများကသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းရှိမရှိကဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် sensing မော်တော်ကားမရှိ, လူ့ input ကိုအနည်းငယ်သာနှင့်အတူကားမောင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများပြီးမြောက်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြုပြင်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောဝင်တိုက်ခြင်း၏လျော့ချရေးနှင့်အတူဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်နေကြသည်။ အဆိုပါအဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်စနစ်များ senors အမျိုးမျိုးကြောင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများမှ GPS ရန်, ရေဒါထံသို့ sonar စေခြင်းငှါသုံးပြီးရေကြောင်းသွားလာမှုလမ်းကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်။ စက်ရုပ်ကားသစ်ကိုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းများနှိပ်နှင့်ဤမော်တော်ယာဉ်များမှအကြောင်းအရာများပေးပို့လူ့မြင်းစီးသူရဲများအတွက် ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအတွေ့အကြုံကိုအောင်ပေါ်သို့။
အဆိုပါ 2019 #NABShow ၏ဆွဲဆောင်မှုပြပါလိမ့်မည် in-ယာဉ်အတွေ့အကြုံ: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းများပိုမိုအမြားအဖြစ်လာခြင်းနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းအကြောင်းအရာစားသုံးမှု, ဖြန့်ဝေသည်မြင်းစီးသူရဲများအတွက်ထူးခြားသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အတွေ့အကြုံများအဘို့တည်ရှိကြောင်း။ အဆိုပါခရီးသည်တင်စီးပွားရေးကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဤအသစ်သော mode ကို၏ပထမလှိုင်းများအတွက်ငွေရစေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးကိစ္စများတွင်သိသာထင်ရှားသောကစားသမားဖြစ်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်ဦးစီးနင်းထစ် NAB ပြရန် ယနေ့ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနည်းပညာနှင့်ချိတ်ဆက်ယာဉ်များအကြောင်းအရာစားသုံးမှုများအတွက်လာမည့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအဖြစ်ချီးကျူးလျက်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူထံမှကိုယ်တွေ့ကြည့်ပါ။ (ထိုများစွာသောအချို့ကို) အစည်းအဝေးများမီးမောင်းထိုးပြအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောများမှာထောက်ပံ့:
တစ်ဦးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Entertainment က Hub စကားဖွင့်။ တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8 | 2: 00 ညနေ - 2: 30 ညနေ | N3311။ အနှစ်ချုပ်: in-ကားတစ်စီးဆက်သွယ်မှုလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်စားသုံးသူ '' နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုသို့သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းတွေအောင်ချိတ်ဆက်ကားများနှင့်အတူမြင့်တက်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပံ့စကားသံကိုလက်ထောက်, သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်၏တစ်ဦးစည်းချက်ပျောက်ဆုံးမပါဘဲ devices တွေကိုဖလှယ်ဖို့ကြည့်ရှုအားဖွင့် Multi-screen ကိုန်ဆောင်မှု: အင်ဂျင်နီယာဤ Feat နေသော်လည်းန်ဆောင်မှုကိုဖမ်း-အထိအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်စားသုံးသူနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ကြ In-ကားတစ်စီးနေသားတကျတယ်ပါပြီ နှင့်ရောနှောသို့စမတ်အိမ်ရဲ့ပေါင်းစည်းမှု။
ကားများနှင့် Next ကို GenTV ချိတ်ဆက်ခြင်း: အခြေခံအဆောက်အအုံဆုံးဖြတ်ချက်များ ATSC 3.0 ချမှတ်ရန် Key ကိုဖြစ်နိုင်ပါ။ တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8 | 3: 00 ညနေ - 3: 30 ညနေ | N3311။ အနှစ်ချုပ်: ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အီးကုမ္ပဏီများသည်မှန်ကန်စွာ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများရုပ်မြင်သံကြား (ATSC 3.0) အတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ချိတ်ဆက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်များ (CAV ရဲ့) များအတွက်စျေးကွက်ကြည့်ပါ။ သူတို့ဟာ In-မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးအပါအဝင် Next ကိုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအဘို့ခိုင်ခံ့အသုံးပြုမှုဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူမူရင်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူများနှင့် aftermarket ပေးသွင်းချဉ်းကပ်နေကြသည်။
ကားတစ်စီး-in Entertainment ကပတ်သ က်. : လေယာဉ်မှူး ON ကားမောင်း! ရေဒီယို OFF? အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ9| 11: 30 နံနက် - 12: 00 ညနေ | N3311 ။ Audi ကားများကကမကထပြု
In-ယာဉ် Entertainment က၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနာဂတ်။ အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ9| 3: 00 ညနေ - 3: 45 ညနေ | N3311 ။ အနှစ်ချုပ်: အဆိုပါ 1950s ကတည်းက, ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာမော်တော်ယာဉ်အတှေ့အကွုံအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ဘလူးတုသ်အတူ CarPlay နှင့် Android အော်တိုနဲ့အသံကိုလက်ထောက်များကဲ့သို့စမတ်ဖုန်းပေါင်းစည်းမှု, အ In-ကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေးဂိမ်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်တွင်ဖြစ်၏။ နှင့်စကားသံများ - - ကိုမဆိုအပိုဆောင်းဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်အင်တင်နာမပါဘဲယာဉ်မောင်းများနှင့်ကားကိုသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုထည့်သွင်းနိုင်သောပစ္စည်းတွေနဲ့ gizmos အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နေစဉ်, အများအပြား drivers တွေကိုသူတို့လက်ချောင်းထိပ်မှာရှိနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးအချို့အဆင့်မြှင့် features တွေရှိပါတယ်။
ချိတ်ဆက်ကားများပေါ်တွင် Run မူမည် ဂြိုဟ်တု. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10 | 10: 30 နံနက် - 11: 00 နံနက် | N3311 ။ အနှစ်ချုပ်: အသံနှင့်လမ်းဘေးအကူအညီများ streaming ကျနော်တို့အင်တာနက် access ကိုကယ်နှုတ်ဖုန်းများအသုံးပြုတူညီသောဆယ်လူလာကွန်ရက်များပေါ်တွင်မှီခိုလမ်းအပေါ်ချိတ်ဆက်ကားများသန်းပေါင်းများစွာပြီးသားရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်းသင်တို့ကလေးတွေနှင့်သိသာဖြစ်လာသည့်ကန့်သတ်များအတွက် Netflix နဲ့ရှိုး streaming စမ်းပါ။ ဆယ်လူလာနေရာတိုင်းမသွားဘူး - ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်အလွန်ဖျော်ဖြေရေးပေမယ်ကိစ္စရပ်များများအတွက်အရေးမပါဘူးအရာ။
ယင်းချိတ်ဆက် Car တွင်တစ်ဦးချောမွေ့စွာ Entertainment က UX ကို Creating ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10 | 3: 00 ညနေ - 3: 30 ညနေ | N3311 ။ အနှစ်ချုပ်: ဒါဟာ 2020 အသုံးပြုပုံတစ်ဆယ်အသစ်သောကားများထဲကကိုးအင်တာနက်ကိုဖွင့်လှစ်ထအားလုံးအသစ်ကဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများထားတဲ့တံတားကုန်းမှချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းင့်နှင့် ဂြိုဟ်တု န်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားသတင်းရင်းမြစ် streaming ရေဒီယို, ။ ဤသည်ကိုသူတို့ဝယ်လိုအားအပေါ်ချင်တဲ့ဂီတ, သတင်းနှင့်အားကစားအကြောင်းအရာချိတ်ဆက်ရန်ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်များအားဖွင့်လိုအပ်သောအလိုလိုသိသေးအစွမ်းထက်ရှာဖွေရေး, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် personalization features တွေစေသည်။ ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးလာမယ့်မျိုးဆက်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်မည်သို့တစ်ချောမွေ့စွာနဲ့လုံခြုံ In-ကားတစ်စီးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအပေါ်တစ်ဦးဆွေးနွေးမှုများအတွက်အော်တို, ရေဒီယိုနှင့်အချက်အလက်ကမ္ဘာကနေအမှုဆောင်အရာရှိဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-03-19
ယခင်: အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအခုတော့သင်္ဘောကနေအနီရောင်ရန်နယူး Rangers ကင်မရာစနစ်ငှားရမ်းခြင်းအိမ်များ Authorized
နောက်တစ်ခု: FIA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲချန်ပီယံရှစ် 10 အတွက် 2019 ပွဲများတစ်ဝှမ်း LiveU HEVC Technologies ကအသုံးပြုခြင်းလွှမ်းခြုံစှမျးတိုးချဲ့